Art is My Life: တိုင်းပြည်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြတာတွေဟာ . . . .
တစ်ချိန်တုန်းက အသက်သွေးတွေ စတေးပြီး တပ်မတော်ကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဘယ်လိုရည် ရွယ်ချက်နဲ့ လဲ
ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် အရှိန်ဝါကို သုံးပြီး လမ်းဘေးမှာ စီးကရက် ဖိုးတောင် ဖို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်က အင်တီ သမားမဟုတ်သလို ပရိုသမားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကတော့ မျက်စိထဲ မှာ အမြင်တော်လွန်း လို့ ပြောတာပါ။
ဖြစ်ပုံကတော့ ဒီလိုဗျာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လတုန်းက မန္တလေး သွားခဲ့တယ်။ အသွားကတော့ ကျွန်တော့ထက် အသက်ကြီး ပုံရတဲ့ ဂျပန် အထက်တန်းတွဲ (မှတ်ချက် ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံးတွဲ ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည်) ရထားကြီးနဲ့ ပြသနာ မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ ခြေထောက် တင်စရာ တန်းလေး ကျိုးနေတာတို့ ဆူဖာက တစ်ဘက်ချိုင့် နေလို့ တစ်လမ်းလုံး ခါးစောင်းပြီး စီးသွားရတာတို့ လောက်ကို တော့ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် လုပ်ပြီး အပြစ် ပြောမနေနဲ့ တော့ဗျာ။ သဘော ထားသေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တစ်ဦး ဖြစ်တာနဲ့ အညီ သီးခံမှပေါ့။ ပြီး တော့ သားသမီး ချင်းကိုယ်ချင်း စာရှာတယ်။ ညပိုင်း မှာ လူမြင်ရင် ရှက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး တွေပါရင် စီးရတာ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်မှာစိုး လို့ မီးမထွန်းပေးဘူး။ ထားလိုက်ပါ ဒါကတော့ ရထားအကြောင်းပေါ့။ အခုပြောမှာက . . .
အပြန်ခရီးမှာ . .
ကားနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်။ လုံခြုံရေးတင်း ကြပ်တဲ့အနေနဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ကြားမှာ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်သုံးဂိတ်ရှိတယ်။ မန္တလေးကနေ စထွက်ရင် ၀မ်းတွင်းနဲ့ မိထ္ထီလာကြားမှာ တစ်ဂိတ် ရန်ကုန် အ၀င်နဲ့ အခြားနေရာ တစ်ခုမှာ တစ်ဂိတ်။ ဂိတ်တစ်ဂိတ် ရောက်ပြီ ဆိုတိုင်း သက်ကြီး ရွယ်အိုနဲ့ နာမကျန်း သူများ မှ အပ ကျန်ခရီးသည် များအားလုံး ကားပေါ်ကဆင်း၊ လမ်းလျှောက်ပြီး မှတ်ပုံတင် အစစ်ခံရတယ်။ စစ်ဆေးတာကို ကြိုဆို ထောက်ခံပါတယ် တိုင်းပြည် လုံခြုံရေး အတွက် လုပ်တာပဲလေ။ အေးမထောက်ခံ နိုင်တာက
၀မ်းတွင်းနဲ့ မိတ္ထီလာ ကြားကဂိတ် မှာ စတွေ့ တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်မှာ ၁၈ ပြည့် မှတ်ပုံတင် မရသေးဘူး။ မလုပ်လို့ မရတာမဟုတ် ဘူးနော်။ လုပ်ရဲ့ သားနဲ့ မရသေးတာ။ အဲဒါကို ၁၈ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် မဟုတ်လို့ ဆိုပြီး အဲဒီဂိတ်က ရစ်တော့တာပဲ။ ကျွန်တော့ လိုလူမျိုးတွေ၊ ကျောင်းသား ကဒ် ကိုင်တဲ့လူတွေက ကားတစ်စီင်္း မှာ အနည်းဆုံး သုံးယောက် လောက်တော့ ပါတယ်။ဘယ်လို ရစ်လဲဆိုတော့
ငါတို့ ကိုအထက်က ညွှန်ကြားထားတယ် ဒီလို အသက် မပြည့် မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင် သူတွေကို စစ်ဆေးပြီး တွေ့ရှိရင် နောက်ကြောင်း ပြန်လွတ်ပါ ခရီးဆက်သွား ခွင့်မပေးပါ နဲ့တဲ့။ မင်းတို့ ကြောင့် တစ်ခြား ခရီးသည် တွေလည်း အချိန် ကြံ့ကြာမယ်။ ကားလက်မှတ် လည်းဆုံးရုံးမယ်။ လိုရာခရီးလည်း မရောက်ဘူး။ အဲလိုမဖြစ် ရအောင် ငါတို့ဘက်က သဘောထား ကြီးစွာနဲ့ လိုက်လျှောပေးမယ်။ နားလည်မှု အနေနဲ့ လန်ဒန် စီးကရက် တစ်ဘူး ၁၇၀၀ တစ်ဘူး ၀ယ်ပေးထားခဲ့ပါ။
အဲလိုပြော ပြီး ဘေးနားလေးက ( အရံသင့် ဖွင့်ထားတဲ့) ကွမ်းယာဆိုင် ပေါ်ကို မှတ်ပုံတင်တွေ၊ ကျောင်းသား ကဒ်တွေ လှမ်းပေလိုက်တယ်။ အဲဒီဆိုင် လေးကနေမှ ကိုယ့်မှတ်ပုံ တင်ကို ၁၇၀၀ နဲ့ ပြန်ရွှေးရတာ။ သူများတွေကတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပြန်ရွှေးကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ ထဲက အကြီးလူ ( အနွေးထည်း ၀တ်ထား သောကြောင့် ဘာအဆင့်မှန်း မသိရပါ) ဆီသွားပြီး ဆိုင်ရာ ခလုပ်တွေ နှိပ်လိုက်တယ်။ သတင်းစာထဲက Clean Government အကြောင်း။ နေပြည်တော် တိုင်ကြားရန် ဖုန်းနံ ပါတ်တွေ အကြောင်း လဲပါတာပေါ့။ ဒီတော့ ပုဂ္ဂိုလ်က သူကိုယ်တိုင်ပဲ ကွမ်းယာဆိုင်က ကျွန်တော့ ရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကို ယူပေးတယ်။ ကျွန်တော် ၁၇၀၀ ကိုပေးရမှာ နှမြောလို့ မဟုတ်ဘူး။ သက်သက်မဲ့ လူလယ်ကျတာက်ို မခံချင်လို့ပါ။ နောက်ဂိတ်တွေ ရောက်တော့လည်း ဒီလိုခလုပ်တွေ ဆက်နှိပ်ရဦး မယ်ထင်တာ၊ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျန်တဲ့ ဂိတ်တွေက အေးဆေးပဲ။ လူကိုသေချာကြည့်တယ်။ မှတ်ပုံတင်ကို သေချာကြည့်တယ်။ ပြီးသွားရော။
ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ အထက်ကညွှန် ကြားထားတာဆိုရင် ဂိတ်သုံးဂိတ်လုံး အတူတူ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ တစ်ဂိတ် တည်းက ထူးထူးဆန်းဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ထင်တာ မှန်သွားပြီး။ ၀မ်းတွင်းနဲ့ မိတ္ထီလာ ကြားက ဂိတ်က သက်သက် မဲ့ ညစ်တာ။
ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တော့ သေချာအောင် လ.၀.က ရုံးချုပ်နဲ့ နေပြည်တော် က ရုံးတစ်ချို့ကို ဖုန်းဆက်ကြည်တယ်။
၁၈ နှစ်ပြည့်မှတ် ပုံတင်မလုပ်ရသေး သူတွေကို ပြည်လည့်ခိုင်းရန် ညွှန်ကြား ထားခြင်းမရှိပါတဲ့။ လ.၀.က ရုံးက ပြောတာကတော့
၁၀ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်သည်လည်း နိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို တရားဝင် အသိမှတ်ပြုတဲ့ လက်မှတ် ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ အချို့တော့ ကန့်သန့် အကြောင်း ရာများကအပ၊ သာမန်ခရီးသွား လာခြင်းတွင် ၁၈ နှစ်ပြည့် မလှဲလှယ် ရသေးခြင်းနှင့် စပ်လျှင်း၍ ရစ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အကယ်၍ ယင်းအပေါ်တွင် ပြသနာအကြောင်းပြ ငွေတောင် ခံလာပါက တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ တဲ့ဗျာ
ကျွန်တော်ကတော့ မတိုင်တော့ပါဘူး သိအောင်တော့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီဂိတ်ကတော့ ၀မ်းတွင့်နဲ့ မတ္ထီလာ ကြားမှာပါလို့
ဒါနဲ့ မိတ်ဆွေ . . .
မန္တလေးရန်ကုန် ခရီးသွားရင် ၁၈ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်ယူသွား
တကယ် လို့မှ ၁၈ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် ပါမသွားရင် ဂါထာတစ်ခု သင်ပေးလိုက်မယ်
၀၆၇ ၄ x x x x x လေးနဲ့ စပြီး အနောက်ထပ် တွေ့ကရာ ဂဏန်းငါးလုံး ပြောလိုက်
စကားလုံးတစ်ချို့ ကိုတော့ ဆီလျှော်အောင် ထပ်ပေါင်းလိုက်
ကိုစိုးဇေယျ ပိုင်တယ်ဗျာ။ အဲလိုလုပ်မှ၊ နို့မို့ဆို ဒီကောင်တွေအားကြီးရစ်တာ